ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Arabhu Isi-Armenia Isi-Estonia Isi-Ewe Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Ukraine IsiBhunu IsiBislama IsiBulgaria IsiCebuano IsiChewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFinishi IsiFulentshi IsiGeorgia IsiGreki IsiHebheru IsiHiligaynon IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLozi IsiMalagasy IsiMalta IsiMyanmar IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPedi IsiPolishi IsiPutukezi IsiQuechua (Sase-Ayacucho) IsiQuechua (SaseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiCanton (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiCanton (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSwahili IsiSwidi IsiTagalog IsiThai IsiTigrinya IsiTonga IsiTsonga IsiTswana IsiTurkey IsiTwi IsiXhosa IsiZulu
“Ehlobo, izinga leqhwa seliba yingxenye eyodwa kuphela kwezine uma liqhathaniswa nalokho elaliyikho eminyakeni engu-30 edlule,” kusho uPeter Wadhams, uprofesa wezimo zolwandle eYunivesithi yaseCambridge, eBrithani. Ngo-2012, imikhumbi engaba ngu-50 yasebenzisa umzila osoLwandle oluseNyakatho owavuleka ngenxa yokufudumala kwembulunga yonke.
Kuye kwatholakala ukuthi ubisi lwebele lomama abasanda kubeletha luqukethe izinhlobo ezingaphezu kuka-700 zamabhaktheriya—okuyinani elikhulu kunalelo ebelilindelwe ochwepheshe. Abacwaningi basazama ukuthola ukuthi anayiphi inzuzo esimisweni sosana sokugaya ukudla nesamasosha omzimba.
Ocwaningweni lokushayela olwenziwe ososayensi baseBrithani kusetshenziswa i-computer kutholakale ukuthi abashayeli abasuke benomkhuhlane bayephuza ukuthatha isinyathelo uma beqhathaniswa nalabo abashayela bephuze utshwala.
I-Afrika ibhekene nalokho abanye abakubiza ngokuthi ukubulawa kwamashumi ezinkulungwane zezindlovu “okungakaze kubonwe ngaphambili” unyaka nonyaka ngenxa yezinyo lazo. Kwesinye isigameko, kwadutshulwa izindlovu eziningana okhakhayini, ngokusobala owayezidubula wayesendizeni enophephela emhlane.
IGreat Barrier Reef ilahlekelwe ingxenye yamakhorali ayo aphilayo kule minyaka engu-27 edlule. Ososayensi bathi ngokuyinhloko lo monakalo ubangelwa yiziphepho zasezindaweni ezishisayo, ukugcwala kwama-starfish anameva kanye nokulahlekelwa umbala kwamakhorali okubangelwa amazinga okushisa aphakeme asolwandle.
Ukubuka Okwezwe—September 2013